Diyaarad milatari oo Ruushku lahaa oo ku burburtay Badda Madow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDiyaarad milatari oo Ruushku lahaa oo ku burburtay Badda Madow
December 25, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Diyaarada ayaa nooceedu ahaa Tu-154, oo ahayd saddex matooray ay sameeyeen Midowgii Soofiidka. [Sawirka: Twitter]
Moscow-(Puntland Mirror) Diyaarad milatari oo Ruushku lahaa oo ay saarnaayeen 91 qof oo ay kamidyihiin suxufiyiin iyo xubno caan ah oo katirsan ciidamada ayaa ku burburtay Badda Madow maanta oo Axad ah wax yar kadib markii ay kacday, sida ay sheegtay wasaarada difaaca Ruushka.
Ma jirto wax war ah oo ku saabsan cid ka badbaaday shilka diyaaradaas.
Diyaarada ayaa kusii jeeday saldhiga Ruushka uu ku leeyahay gudaha Suuriya ee Latakia, waxayna siday 81 qof oo rakaab ah, sida ay ku warantay wakaalada wararka Ruushka ee Interfax.
Kooxaha badbaadada ayaa Badda Madow ka wada baaritaan ay ku baadi goobayaan burburka diyaaradda.
September 5, 2016 Ugu yaraan 24 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay caasimada Afkaanistaan ee Kabul